From Staten Island to NYC Marathon
Berita Yang Cemas dan Lemaskan Najib: Presiden PAS Sedia Tanding Di Pekan
Down and Dirty, The president is giving half the country the finger by Mona Charen
Iman in Than Twe Arrested, Arakan Commission Member Expelled
New Chinese Stealth Fighter?
တောင်ကုတ်မှာ အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရသော မြန်မာပြည်သား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ရှဟ်ဒီ (၁၀) ဦးနှင့် အဖိနှိပ်ခံ ဗမာပြည် မွတ်စလင်များရဲ့ ဘ၀
If two top Muslim leaders in the Commission, U Tin Mg Than and U Nyunt Mg Shein are truly arrested UN and OIC must act quickly to save them from Genocide Murders silencing them permanently
Nazri Perlu Lepaskan Jawatan Menteri, Ikut Jejak Langkah Shahrizat
Violence Report in Arakan Vol-1 _Burmese
မှူးဇော် သဘောထား သမ္မတရုံး နာမည်ပျက်မည်
Immeasurable Destruction? The Worst Has Yet To Come
Stop Wira Thu and Rakhine Rakhine Monks to save the dignity of Buddhism
ကြောက်စရာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်း
ရခိုင်အရေး အစိုးရ ကိုင်တွယ်မှု ညံ့ဖျင်းသည်
Posted: 02 Nov 2012 10:45 AM PDT
Rakan KL,apeople's movement to preserve the heritage of Kuala Lumpur have been organising activities and walkabouts around the historical parts of the city. Wuan and I participated in the Merdeka Walk2lead by Victor Chin last Saturday. It was to begin from Tun Shin Hospital at Jalan Pudu and end at the Chin Woo Stadium at Jalan Hang Jebat.
Church of St. Anthony at Jalan Robertson, Kuala Lumpur.
From the church, we made our way to the disused car showroom at the junction of Jalan Robertson and Jalan Pudu. The sidewalk, although paved with tactile guide path, hadapoorly done kerb ramp that was steep and dangerous for wheelchair users even with assistance. That wasaglaring example of doing for the sake of doing without taking into consideration if the facility was useful or not. Makingakerb ramp does not make the sidewalk any more accessible that if it was without one if they do not conform to accessibility standards.
These drain grates along Jalan Galloway may trap wheelchair casters and throw the wheelchair user off.
With the sidewalks practically inaccessible, I had to go on the road most of the time while speeding vehicles whizzed by. Drain grates with the grilles running parallel to the road can potentially trap wheelchair casters and throw the user off the wheelchair. The grates are dangerous to cyclists as well. To avoid these grates, I had to go further out on the road to brave oncoming traffic. Fortunately, Felix was there the direct traffic away from me. Still, these are the dangers that wheelchair users have to contend with while out in the streets of Kuala Lumpur.
The group tookabreather under the shade of one of the houses at Jalan Sin Chew Kee. This road is lined with two rows of old houses which are priced overamillion ringgit each. This quieter area is in sharp contrast against the busy Jalan Pudu which is justastone's throw away. Wuan and I had to abandon the walkabout and turn back here as the way to the other stops was fraught with barriers and other difficulties that made itagargantuan task to traverse onawheelchair.
Wheelchair Users Disabled In Malaysia
Inaccessible Sungai Dua
Posted: 02 Nov 2012 09:51 AM PDT
Those urging the city to halt the run believe that the thousands of Marathon volunteers could direct their efforts towards post-Sandy relief and cleanup, "and they also argue that the event will divert thousands of police from important hurricane-related duties." But despite petitions circulating, work started up again yesterday on the Marathon route.
"We're going to die! We're going to freeze! We got 90-year-old people!" Donna Solli told visiting officials.
"You don't understand. You gotta get your trucks down here on the corner now. It's been three days!"
Molinaro urged New York City Mayor Michael Bloomberg Wednesday to cancel Sunday's New York City Marathon. The race's staging area is on Staten Island and Molinaro said it would be "crazy, asinine," to have the race after what has happened.
"My God. What we have here is terrible,adisaster," Molinaro said Wednesday. "If they want to race, let them race with themselves. This is no time foraparade. A marathon isaparade. Now is the time to put your shoulder to the wheel. If they want to prepare for something, let them prepare for the election, notamarathon."
"Do you realize how many police officers you need foramarathon?" he asked. "There are people looting stores on Midland Avenue. There is looting taking place in the homes on the South Shore that were destroyed. That is where we need the police."
Posted: 02 Nov 2012 10:12 AM PDT
"Saya ikut keputusan parti. Saya serah kepada parti dan partilah yang akan buat keputusan. Parti hendak suruh bertanding Marang ke… atau Pekan, termasuklah, jika parti suruh saya bertanding di Pekan, saya bertanding di Pekan," ujarnya.
Beliau yang juga Ahli Parlimen Marang turut menyatakan kesediaan jentera PAS pada bila-bila masa diadakan pilihan raya kerana persiapan telah dibuat sejak setahun lalu.
"Saya sudah melawat keseluruhan kawasan pilihan raya sejak setahun lalu. Saya buat jadual melawat dan keseluruhannya kerja telah dibuat sejak setahun untuk menghadapi pilihan raya bila-bila masa.
"Bahkan, kebanyakan Dewan Undangan Negeri (Dun) telah membuat culaannya yang terperinci. Ini termasuklah, persediaan jentera pilihan raya secara menyeluruh. Cuma kita menunggu tarikh pilihan raya pada bila-bila masa sahaja," ujarnya. -HD
yabas Abdul Hadi Awang Oleh Mohd Sayuti Omar.
Walaupun mungkin kenyataan itu lebih kepada gimik, tetapi ada kebenarannya di situ.Mungkin Abdul Hadi memberi mesej untuk berdepan dengan Umno beliau sanggup pergi ke mana-mana saja kawasan yang sekaligus menyerlahkan beliau sudah hilang sabar dalam berdepan dengan kerenah Umno.
Cara itu juga membuktikan bahawa Pas bukan berjuang di dalam lopak sendiri tetapi perjuangannya universal.
Bagi Abdul Hadi kemenangan kerusi dan memenanginya bukan yang mutlak. Baginya kesediaan melawan seorang ketua parti yang ditolak atau dianggap sebagai jahat, khianat adalah satu tanggungjawab dan kewajiban. Kalau perjuangan Pas benar dan apa digagaskan Abdul Hadi adalah haq kenapa harus takut membiarkan dia ke Pekan.
Tidak timbul kalau ada mengatakan Abdul Hadi sengaja mencari naas. Bagi perjuangan Pas dan beliau sendiri, kemenangan itu bukan bermakna memenangi kerusi tetapi kemenangan itu adalah berlawan dengan musuh secara mendada. Tidak juga perlu soal bukankah kalau kalah Abdul Hadi tidak boleh memegang jawatan? Persoalan itu hanya bagi mereka yang jahil dan naif dalam memahami erti perjuangan.
Saya berharap kenyataan dan kesediaan Abdul Hadi itu menjadi realiti. Kalau hasrat Abdul Hadi itu menjadi kenyataan, sayalah orang pertama akan menjunjung duli kepada presiden Pas itu dan menerimanya sebagai seorang pejuang tulen yang berani, ikhlas dan bertepatan dengan prinsip perjuangan Islam ala Pas. Bahawa Abdul Hadi bukan seorang politician sekluar dan munafik seperti kebanyakan yang lain yang juga pengecut untuk mengejar musuh ke hingga ke laman rumah.
Syabas kepada Abdul Hadi Awang atas keberanian melemparkan hasrat itu. Dan Pas perlu mencuba strategi berkenaan. -MSO
Posted: 02 Nov 2012 07:28 AM PDT
You could, without stretching, make an aesthetic case for voting against Barack Obama. Leaving aside the hobbled economy, the promised second term "flexibility" with Putin, the job-diminishing Dodd/Frank act, the Benghazi debacle, the train wreck called Obamacare, the assault on the free exercise of religion, the pretense that the Lilly Ledbetter Act codified equal pay for equal work, the limp response to Iran's nuclear threat, the many Solyndras, kicking Bowles/Simpson to the curb, the "free" contraceptives, the recommendation that Israel do some "serious self-reflection," the preening over bin Laden's assassination, the Bill Clinton ad saying Romney wouldn't have approved the mission, the pretense that Gabby Giffords's shooting should put us on the path to political civility, the savaging of Paul Ryan inaspeech to which he had been specifically invited, and the fact that Obama didn't know the number when David Letterman asked about how big the national debt has become — there are grounds for firing Obama that rest upon seemliness.
Barack Obama isn't the first candidate to go ugly in search of votes — but he may well be the first whose reputation for high-mindedness seems not to have been the least bit dented by his bottom-feeding. Both he and his acolytes on the left have dragged our public life down to the vulgar level to which they've already dragged popular culture. Often, the two intersect. Madonna exhorts her fans ataconcert to vote for Barack Obama and when some boo, she extends her middle finger. MoveOn.org has an ad up that is just the sort of thing Comedy Central types find naughty and delightful — elderly Americans using foul language about Romney. One woman in her 90s promises to "c*** punch" the candidate. Ah, hope and change.
The president isn't responsible for every vile expression of his supporters. But is he at least responsible for his vice president? Biden's behavior is beyond unseemly. He has strayed so far beyond propriety as to provoke doubts about his mental stability. Do we really think it's cute foravice president to callamajor piece of legislationa"big f***ing deal"? Is it just ol' Joe being Joe when he tellsablack audience that Republicans "want to put y'all back in chains"? His performance in the debate — bullying, crude, manic, and boorish — has setanew low for debates on the national level. We've seen befuddled performances, surly ones, bored, and even incoherent displays by candidates for president and vice president. But Joe Biden behaved likeamean drunk. The response of his boss and his party to this thuggishness was . . . applause.
The debate was not Biden's lowest moment. That came during the solemn ceremony greeting the body of slain Navy SEAL Tyrone Woods. Biden first approached Charles Woods and, referring to his own experience with family tragedy, noted that "I received one of those damned phone calls." Justafew minutes later, the vice president of the United States sidled over to the grieving father and asked, "Did your son always have balls the size of cue balls?"
Biden seems to set the tone for the Obama White House. Presidents have used swear words before, but Barack Obama now has the distinction of using them, not in private, but in an on-the-record interview. And not in the abstract, as in, the "s*** hit the fan" but as an epithet about his opponent. It was Barack Obama's campaign, notasuper PAC, not an independent supporter, that ranacrass ad aimed at women comparing voting for Obama with losing one's virginity. (An idea lifted from, of all people, Vladimir Putin!)
Mr. Obama was alwaysadown-the-line leftist, but when he ran for president the first time, he did so with dignity and evenatouch of elegance. That style may have led some voters to overlook the reactionary leftist policies the "cool" candidate was peddling.
This time, the elegance is gone, the fangs are bared, and standards of honesty are long gone. His policies failed, so no accusation against Mitt Romney is held back: He's an enemy of women who will outlaw all abortions (no exceptions), he will raise taxes on the middle class just to cut them for the rich, he ships jobs overseas and pockets the profits, he won the first debate through lies (sheesh), he gives cancer to the wives of unemployed workers, he delights in bankrupting companies, he wants to prevent women from getting "access" to birth control, and so on.
It's as if Barack Obama, once so stylish, is making the same gesture Madonna did — to at least half the nation. National Review
Posted: 02 Nov 2012 07:20 AM PDT
November 1, 2012 M-Media
UPDATED by my friend. Another two Muslims who went to negotiate about the arrested were also arrested. And the RUMOURS of2top Muslim leaders from Comission Members arrested, U Tin Mg Than and U Nyunt Mg Shein confirmed that Genocide Murders are trying to silence the victim Muslims.
Local authority arrested Iman Wahid of Jamah mosque in Sittwe on November 1. Iman Wahid is also the chairman of Olama Islamic Theologians' Organization of Than Twe.
Tin Aung, an executive of the mosque was arrested as well on the basis of possessing two swords.
The arrests follow the government's announcement on October 31 to have people in Arakan state submit their weapons to nearest police stations within three days. Iman Wahid and Tin Aung were arrested before the due date.
In Yangon, there is news spreading that Haji Tin Maung Than,arepresentative of Islamic Affairs Council to the government-back
ed Arakan Conflict Inquiry Commission, has allegedly been Expelled from the commission for suggesting that the Arakan state premier and security affair minister Colonel Htine Lin resign.
Tin Maung Than neither confirm nor reject the news, according to Myanmar Muslim Net (www.myanmarmuslim.net <http://www.myanmarmuslim.net/>).
On October 31, the President office also announced to arrest and prosecute those who mastermind the conflict in Arakan state. Instead of arresting perpetrators, the government is targeting Muslim leaders and trying to charge Muslims with various accusations,apolitical analyst commented.
There are anti-Muslim campaigners who are openly distributing anti-Muslim leaflets, giving speeches and mobilizing people for violence. They range from monks and township level official to the chairperson of Rakhine Nationalities Development Party, Dr. Aye Maung, and Rakhine leaders who call for segregation of Rohingyas and Rakhines and the expulsion of Rohingyas from Arakan state.The government has not taken any measure against their activities.
Posted: 02 Nov 2012 07:18 AM PDT
(Peking) While the Traitor to the American Nation, President Obama, bends over backwards in which to appease the enemies of the Nation, it has come out in the wash that China, that peaceful nation which invaded (in 1950) and still occupies Tibet, which threatens the neighbours and makes outrageous claims about just where its borders end (a few miles off the Philippines), has unveiled yet another stealth aircraft. Picture came outafew months ago ofastrange aircraft being transported toamilitary airfield, but the so called experts presumed it wasahoax, until yesterday when the J-31 flew for the first time.
Under the Obama administration, the US ended production of their world beater F-22 at 187 aircraft. Yes, that's right, 187 aircraft in which to defend the nation. The Democrats came out with the statement that nobody would be able to fieldastealth aircraft for over 20 years. And what do you know? The Russians come out with 1, the Chinese with 2, the Turks are looking at building one, and the Japanese, angry that the US won't sell them any F-22 in which to defend themselves from the Chinese, have started the ball rolling in which to build their own. It appears that Obama is more ofathreat to the American people than Russia and China combined. Hat tip: Eye On The World
Posted: 02 Nov 2012 07:16 AM PDT
[Mahamyoo Mahamyoo] on Tuesday, October 30, 2012 at 4:31am
2012 ဂျွန်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် အုပ်စုဖွဲ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှုကြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဆိုရင် ၄ လကျော်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျွန်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေမှာ သံတွဲ-ရန်ကုန် ရိုးမသစ္စာ ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာ အခြားခရီးသည်များ အပါအ၀င် သူတော်ကောင်းတရား ပွားများသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း တောင်တွင်းကြီးမြို့မှ ၆ ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်း မြောင်းမြမြို့မှ ၂ ဦး၊ သံတွဲမြို့မှ ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်တာဝန်ခံ ၂ ဦး တို့ဟာ တောင်ကုတ်မြို့ကို ဖြတ်သန်းနေစဉ် လူစုလူဝေး ၃၀၀ ကျော်က မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ ကားကိုတား၍ လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ၀ိုင်းဝန်းခုတ်ထစ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်၊ ပုံစံ ၁၀ မူရင်း၊ ခရီးသွားသက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပြီး နေထိုင်ရာ အရပ်ဒေသ အမှန်တွေကို သိရဲ့သားနဲ့တောင် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာနှင့် အချို့သော သတင်းဂျာနယ်များက အသတ်ခံရသူတွေဟာ မြန်မာပြည်ကမဟုတ် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းက ခရီးသွားကုလားများဟု ဗြောင်လိမ်ခဲ့ပါတယ် ၊ ယခုချိန်ထိ အကြမ်းဖက်လူသတ်မှု မဖော်သေးပါဘူး၊ မျက်မြင်သက်သေ မရှိဘူးလိုလို ၊ ဖော်ထုတ်လိုက်ရင် ပြဿနာပိုကြီးထွားနိုင်တယ်လိုလို နဲ့ ဖျောက်ဖျက်ပြစ်ဖို့ ကြံစည်နေကြပါတယ်၊
တောင်ကုတ် အကြမ်းဖက်မှု ပြီးတော့ စစ်တွေ ဘူးသီးတောင် မောင်းတော မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို မောင်းထုတ်ဖို့ လုပ်ကြပြန်တယ်၊ မွတ်စလင် သောင်းနှင့်ချီပြီး အိမ်တွေ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခံရတယ်၊ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊များစွာ အသက်ဆုံးရှုံးကြ အသတ်ခံရပြန်တယ်၊ မီဒီယာတွေက ဘက်လိုက် ဖော်ပြ ၀ါဒဖြန့်ကြနဲ့ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုဆီ ဦးတည်အောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ကြပြန်တယ်၊ ဘုရားသားတော် မေတ္တာဝါဒီ ဆိုသူတွေကလည်း ပေါ်ပေါ်တင်တင် လူသားချင်း စာနာမှုတွေကို ဘေးချိတ်ပြီး မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာမှ လွဲ၍ ကျန်လူမျိုး ဘာသာတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီး အခြား ပြည်သူတွေကိုလဲ ၀ါဒဆိုး မှိုင်းတိုက်ကြပြန်တယ်။ ဒုက္ခရောက် ခိုကိုးရာမဲ့နေသူတွေကို (မွတ်စလင်+ဗုဒ္ဒဘာသာ နှစ်ဖက်လုံး) အကူအညီပေးမယ့် OIC ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လိုလို ဘာလိုလို ၀ါဒဖြန့် မှိုင်းတိုက်ပြီး OIC အလိုမရှိ ဆိုပြီး ဆန္ဒပြကြပြန်တယ်၊ တကယ်တော့ ကုလသမဂ္ဂ ပြီးရင် ကမ္ဘာမှာ OIC ဟာ ဒုတိယမြောက် အင်အားအကြီးဆုံး အကူညီ ပေးနိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုပါ။ ဒီအဖွဲ့ခင်ဗျာ ဗမာပြည်ရောက်မှပဲ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လိုလို ဘာလိုလို နာမည်တပ်ခံရတော့တယ်၊ မေတ္တာဝါဒီနာမည်ခံထားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ကရင်ပြည်နယ် နှင့် အချို့ဒေသများမှာ မွတ်စလင်တွေကို မဆက်ဆံရ၊ မွတ်စလင်ဆိုင် ဈေးမ၀ယ်ရ၊ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အိမ် ခြံ လယ်ယာမြေ မရောင်း မ၀ယ်ရ လို့ စာထုတ်လိုက်တော့ တော်တော်လေး အံ့သြသွားရပါတယ်၊ ဂလိုဘယ်ဂျာနယ်မှာ တရားဝင် ဖော်ပြခဲ့တာပါ၊ အစိုးရကလဲ သိသိကြီးနဲ့ မျက်နှာလွဲ နေခဲ့ပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးတွေဟာ နေရာဒေသ အတော်များများမှာ ပိုမို လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။
မွတ်စလင်တွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ်ဘာလို့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်မခံသလိုလို မသိသလိုလို လုပ်နေကြပြီး အခု သံရုံးတွေရှေ့မှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဝါဒ ရပ်တန့်ပါ၊ stop animism ပြောနေတဲ့သူတွေဟာ နားမလည်တာလား၊ မသိတာလား၊ အယောင်ဆောင်နေတာလား မေးချင်ပါတယ်၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှာဖြစ်ခဲ့တာက အိမ်ခြေ လက်တစ်ဆုပ်လောက်နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း အနည်းငယ် ဖျက်ခံရတာပါ၊ လူမသတ်ခဲ့ လူမသေခဲ့ပါဘူး၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရကလဲ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ အရေးယူပါတယ်၊ ၀န်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားပြီး ပျက်ဆီးမှုတွေအတွက် တာဝန်ယူကြောင်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသစွာ ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ယနေ့ သတင်းမှာ ဖျက်ဆီးခံရသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို မူလပုံစံအတိုင်း ဗိသုကာ ပညာရှင်များဖြင့် အစိုးရက ငွေကြေးကုန်ကျခံကာ၊ စစ်တပ်မှကွပ်ကဲကာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း (အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်က ကိုယ်တိုင် ပြောကြားသွားခဲ့သည်ကို ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာက မြို့အချို့မှာ ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အိမ်များ ဗလီများ ဟာ နှစ်တွေသာ ကြာလာပါတယ် အခုထိ အပျက်ဆီးတွေအတိုင်း ထားရတာပါ၊ ပြင်ဖို့ ခွင့်မပြုပါဘူး၊၊ ဗမာပြည်မှာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေက တာဝန်ယူပေးဖို့ နေနေသာသာ ကိုယ့်ငွေနဲ့ ကိုယ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတာတောင် ခွင့်မပြုတာပါ။ နောက်ပြီး အဲဒီ ဖြစ်စဉ်တွေအတွင်း တောင်ငူမြို့ နှင့် ကျောက်ဆည်မြို့ တွေမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မိသားစုလိုက်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အကြမ်းဖက် မီးရှို့ အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ ၊ ဒီလို အစွန်းရောက် လူမျိုးကြီးဝါဒအခြေခံပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေ လုပ်နေကြသူတွေ၊ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာက လွဲရင် အခြားဘာသာဝင် တွေကို ရန်သူလို သဘောထားနေကြသူတွေကြောင့် တိုင်းပြည် ဂုဏ်သိက္ခာ ငြိုးနွမ်းနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု တပါတ်အတွင်း ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို အဆိုးဝါးဆုံး အကြမ်းဖက် မီးရှို့ သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြား ကျောက်ဖြူ မြေပုံ နှင့် မြောက်ဦး အစရှိသည့် မြို့တွေမှာ အခု လောလောဆယ် ထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်၊ အစိုးရက ထိထိရောက်ရောက် အကာကွယ် မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ရွာလုံးကျွတ်၊ ရပ်ကွတ်လုံးကျွတ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး သောင်းနှင့်ချီ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးရသူ ရာဂဏန်းထိ ရှိခဲ့ပါတယ်၊ စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လတ်နေကြပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ ဖြစ်နေကြရပါတယ်၊ အချို့မှာ ဘေးကင်းရန်အတွက် ပင်လယ်ထဲ လှေများဖြင့်၎င်း၊ တောင်ကုန်းများပေါ်သို့၎င်း တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်၊
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် လုံခြုံရေး စိတ်မချရတဲ့အတွက် ယခုနှစ် ကုရ်ဘာနီ အီးဒ်ပွဲတော် ကို တစ်နိုင်ငံလုံး မလုပ်ခဲ့ရပါဘူး၊ အချို့ဒေသများတွင် ကုရ်ဘာနီကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်သော လှုံ့ဆော်မှုများ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့များမှ ပြုလုပ်မှုများရှိနေခဲ့ပြီး ဥပဒေအရ ကုရ်ဘာနီ လုပ်ခွင့် ရှိသော်ငြားလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီး ၅ ဖွဲ့မှ မလိုလားအပ်သော ပရိပက္ခများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကုရ်ဘာနီ မလုပ်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သောကြောင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးက မွတ်စလင်များ ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ကုရ်ဘာနီကို စွန့်လွှတ် ကုရ်ဘာနီ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်၊
ဗမာပြည်မှာ တာဝန်ရှိသူတချို့နှင့် မီဒီယာများ၊ ရခိုင်ပါတီ အပါအ၀င်၊ ဘုန်းတော်ကြီးအချို့ ပါဝင်ပါတ်သက်နေသော မွတ်စလင်များကို ဖိနှိပ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်မှုများကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ဟူသော လမ်းကြောင်းဟာ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်စ ပြုလာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုးဆုံးမှာ အများ ထောက်ခံ အားကိုးကြသော ပါတီကြီးက ပါတီဝင်တချို့မှ မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒဖြန့် စာရွက်စာတမ်း ၊စီဒီခွေများ ကို ပြောင်ပင် ဖြန့်ဝေနေခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီခေါင်းဆောင် နိုဗယ်လ်ဆုရှင် ကိုယ်တိုင် မလုပ်သင့်တာ လုပ်နေကြသော မိမိပါတီဝင်များ အပေါ် တားဆီးခြင်း မပြုသည်ကို တွေ့နေရပါတယ်။ ရှေးဘုရင်များခေတ်မှ သစ္စာရှိစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော မွတ်စလင်များ၊ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွပ်လပ်ရေးအတွက် ဗမာပြည်အတွက် သစ္စာရှိစွာ အသက်ပေး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသော မွတ်စလင်များ၊ အာဇာနည်များ ၊ယနေ့ခေတ်တွင် တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေး ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော မွတ်စလင်များ ရှိနေသည်ဆိုတာကို လိမ်လို့ မရသည့် အမှန်တရားပင်ဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာသော အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်နိုင်ရန် ဗမာပြည်တွင်း နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူမျိုးစွဲ ၀ါဒစွဲများ၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်ဝါဒများကို စွန့်လွှတ်ပြီး လူကို လူလို့ မြင်ပါ၊ ဘာသာတစ်ခုနှင့် တစ်ခု အပြန်အလှန် လေးစားကြပြီး၊ တရားမျှတမှု၊ မိမိယုံကြည်ရာကို ကိုးကွယ်ခွင့် နှင့် လူသားချင်း စာနာတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို မွေးမြူကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် ။ POST BY MOHAMMAD ALLI ( 29 .10 . 2012 )
အခု တောင်ကုတ်မှာ အသတ်ခံရတဲ့ မွတ်စလင်တွေရဲ့ အသတ်မခံရခင် မိမိမြို့မှာ နေစဉ်က ရှားရှားပါးပါး ကျန်နေတဲ့ သူတို့ပုံလေးတွေ ရသလောက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်၊ အသတ်ခံရသူတွေ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကို ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ အတွက် နေထိုင်ရာ အရပ်ဒေသ မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း ၊ အလုပ်အကိုင် စသည်တို့ကို ရနိုင်သလောက် စုဆောင်းထားတာပါ၊ ကျန်နေသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ညီနောင်များ ၀ိုင်းဝန်းဖော်ထုတ် ပေးစေလိုပါတယ်။ POST BY MOHAMMAD ALLI ( 29 .10 . 2012 )
တောင်ကုတ်မှာ အုပ်စုဖွဲ့ အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ရှဟ်ဒီ (၁၀)ဦး၏ မှတ်တမ်းအကျဉ်း
ဓါတ်ပုံများ တွင် အချက်အလက် အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားပါသည်။
အမည် – ဦးနီ / အနီကာ / ဟနိဖ်ဘိုင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၈/တတက (နိုင်) ၀၉၅၅၃၀ မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၃၀၉ ၀ါဆိုလဆုတ် (၁၃) ရက် အသက် – ၆၅ နှစ် မိဘများ – ဦးစူဖီကာကာ+ဒေါ်ဇိန္ဒမာ ။ မွေးချင်း ၄ ယောက်အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်၊ အလုပ်အကိုင် – မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း နေရပ် – အုန်းတော (၂) ရပ်ကွက်၊ ဘူတာပါတ်လမ်း၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ မကွေးတိုင်း။ ဦးနီ (အနီကာ) တွင် ဇနီး ဒေါ်ဇိန်ဘီ /ဒေါ်ခင်သန်းမြင့် နှင့် သားသမီး ရ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ယခုနှစ် ဟဂ်ျသွားရန် ပါစ်ပို့ကို သာသနာ့ခရီး မထွက်ခင်ကမှ တင်ထားခဲ့ပြီး တောင်ကုတ် ခရီးစဉ်မှ အပြန်တွင် ပါစ်ပို့ထုတ်ယူရန် စီစဉ်ထားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အမည် – ဦးမောင်ကို / ဦးနီပွေး / မိုဟမ္မဒ်ရှရစ်ဖ် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၈/တတက (နိုင်) ၀၉၅၅၄၈ မွေးသက္ကရာဇ် – 22 . 11 . 1954 အသက် – ၅၈ နှစ် မိဘများ – ဦးဆူဘန်း + ဒေါ်ဇိန္ဒမာ ။ မွေးချင်း ၂ ယောက်အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဈေးသည် နေရပ် – အုန်းတော (၂ ) ရပ်ကွက် ၊ ဘူတာပါတ်လမ်း ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊မကွေးတိုင်း။ ဦးမောင်ကို တွင် ဇနီး ဒေါ်ရင်ရင်/နာဆစ်ဘီ ( လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်က ကွယ်လွန် ) နှင့် သားသမီး ၄ ယောက် ၊ မြေး ၃ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဦးမောင်ကိုသည် ကျန်းမာရေးမကောင်းသော အငယ်ဆုံးသား ( မကြာခဏ တက်သော ရောဂါရှိသည့် ) ဖွရ်ကန်းဘိုင် နှင့် အတူ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဖွရ်ကန်းဘိုင်သည် တယောက်တည်း နေထိုင်နေရပါသည်၊ကျန် သားသမီးများမှာ အိမ်ထောင်ခွဲများဖြစ်ပါသည်။
အမည် – ဦးတူးတူး / ဦးအေးလွင်/ ရှဖီးဘိုင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၈/တတက (နိုင်) ၀၉၃၅၇၃ မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၃၁၉ ခုနှစ် ၀ါဆိုလဆန်း ၁၅ ရက် အသက် – ၅၅ နှစ် မိဘများ – ဦးအဖိုးကြီး + ဒေါ်ကရင်မ်ဘီ ။ မွေးချင်း ၄ ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်၊ အလုပ်အကိုင် – မွေးမြူရေး နေရပ် – ရွှေကြာအင်း (၁) ရပ်ကွက် ၊အပိုင်း (၂) ပန်ထွာလမ်း ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊မကွေးတိုင်း။ ဦးတူးတူး တွင် ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူမြင့်/ရိုဇီမာဘီ နှင့် သားသမီး ၆ ယောက် ၊ မြေး ၂ ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်၊ အငယ်ဆုံးသား အဘားစ်ဘိုင် သည် မော်လ၀ီကျောင်း တက်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဟဂ်ျသွားရန် ပါစ်ပို့ကို သာသနာ့ခရီး မထွက်ခင်ကမှ တင်ထားခဲ့ပြီး တောင်ကုတ် ခရီးစဉ်မှ အပြန်တွင် ပါစ်ပို့ထုတ်ယူရန် စီစဉ်ထားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
အမည် – ကိုအောင်မြင့် /အစ္စလာမ်းခန်း မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၈/တတက (နိုင်) ၀၉၄၅၅၇ မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၉၆၃ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀) ရက် အသက် – ၄၉ နှစ် မိဘများ – ဦးလှမောင် + ဒေါ်လှရွှေ ။ မွေးချင်း ၇ ယောက်အနက် ဒုတိယမြောက်သား ဖြစ်သည်၊ ပညာအရည်အချင်း- သမိုင်းဘာသာဖြင့် ဘွဲ့ရ ။ အလုပ်အကိုင် – အလှကုန်ဆိုင် ။ နေရပ် – ရွှေကြာအင်း (၂) ရပ်ကွက် ၊ဒေါင့်ဆိုင်အိမ်လမ်း ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊မကွေးတိုင်း။ ကိုအောင်မြင့်တွင် ဇနီး မမိုးသူဇာခင်/ ဖရီဒါဘီ နှင့် တစ်နှစ်သားအရွယ် သားငယ်လေး သက်ပိုင်ဦး/ သွာရစ်ဖ်ဂျမီးရ် တို့ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။
အမည် – ကိုတေဇာမြင့် /ဗေလားလ်ဘိုင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၈/တတက (နိုင်) ၁၈၈၉၈၁၅ မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၀ . ၄ . ၁၉၈၄ အသက် – ၂၈ နှစ် မိဘများ – ဦးယာကွတ် + ဒေါ်မြင့်မြင့် ။ မွေးချင်း ၄ ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသား ဖြစ်သည်၊ ပညာအရည်အချင်း- အဌမတန်း အလုပ်အကိုင် – ရွှေမိသားစု လ္ဘက်ရည်ဆိုင် နေရပ် – အုန်းတော (၂) ရပ်ကွက်၊ အုန်းတော (၁) လမ်း ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊မကွေးတိုင်း။ ဗေလားလ်ဘိုင် တွင် ဇနီး မစုစုကြည်ထွေး/ ရိုကီယာဘီ သည် ကိုယ်ဝန်ဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ ဗေလားဘိုင်၏ဇနီး ရိုကီယာဘီသည် မကွေးမြို့ ကောင်းမွန်ဆေးခန်း၌် သမီးရတနာလေး ကို ၂၅. ၉ .၂၀၁၂ တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ယခု ရိုကီယာဘီ သည် မိုဇိုင်ရ်နားဘီ / မတေဇာစုကြည် ဟု အမည်ပေးထားသော သမီးငယ်လေးနှင့် စလင်းမြို့ရှိ မိဘများနှင့် အတူ နေထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။
အမည် – ကိုတင်မောင်ထွေး /ရှုအိုင်ဗ်ဘိုင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၈/တတက (နိုင်) ၂၁၁၀၈၄ မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၆ . ၉ . ၁၉၉၁ အသက် – ၂၁ နှစ် မိဘများ – ဦးမော်စီ + ဒေါ်မွတ်နီး ။ မွေးချင်း ၇ ယောက်အနက် ၆ ယောက်မြောက်သား ဖြစ်သည်၊ ပညာအရည်အချင်း- အဌမတန်း အလုပ်အကိုင် – ' ရှမ်းကုန် ' (သစ်သီးဝလံ) ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ကိုင်သည်။ နေရပ် – အုန်းတော (၁) ရပ်ကွက်၊အပိုင်း (၄) ၊ အုန်းတော (၁) လမ်း ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊မကွေးတိုင်း။ ရှုအိုင်ဗ်ဘိုင်သည် မိဘများနှင့်အတူ နေထိုင်ပြီး လူလွတ် ဖြစ်သည်၊ မိဘများနှင့် အတူ သစ်သီးဝလံ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ကိုင်သည်၊ ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ရသူများထဲတွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်၊
မြောင်းမြမြို့ ( ဧရာဝတီတိုင်း ) မှ ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ရသူ (၂) ဦး
- ကိုအောင်ဘိုဘိုကျော် ၂၆ နှစ် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၁၄/မမန (နိုင်) ၂၇၇၆၉၅ အဖအမည် – ဦးထွန်းထွန်းဇော်
- ကိုဇော်ညီညီထွဋ် ၃၃ နှစ် မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၁၄/မမန (နိုင်) ၁၄၈၁၃၃ အဖအမည် – ဦးအီဗရာဟင်
သံတွဲမြို့ ( ရခိုင်ပြည်နယ် ) မှ ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ရသူ (၂) ဦး
- ဦးအောင်ဇော်ဝင်း / ကိုမောင်မောင် ၄၅ နှစ်
- ဦးညီညီထွန်း ၄၂ နှစ်
အသတ်ခံခဲ့ရသူတွေဟာ မြန်မာပြည်သား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဆိုတာ သိစေရန်နှင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အားလုံး လိုလားနေတာက တရားမဲ့ဝါဒီ လူစိတ်ကင်းမဲ့သူတွေက အရက်စက်ဆုံး သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျအစွဲကင်းကင်း နဲ့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပေးဖို့၊ တရားမျှတစွာ ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပါ၊
အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှု ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေအတွက် မိတ်ဆွေများအားလုံး တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအားလုံးဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်းကြဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်၊ ( အာရဗီ ၊ အူရ်ဒူ ၊ အင်္ဂလိပ် နှင့် ဘာသာရပ် အမျိုးမျိုးကျွမ်းကျင်သူများ ဘာသာပြန်၍ share လုပ်ပေးကြပါရန်။ ) POST BY MOHAMMAD ALLI ( 29.10.2012)
[တောင်ကုတ် အကြမ်းဖက် ရမ်းကားသော ရခိုင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတို့၏ လူမဆန်စွာ အနိုင်ကျင့် လူသတ်ပွဲ ရင်နုင့်ဖွယ်ရာမြင်ကွင်းများ]
Posted: 02 Nov 2012 07:12 AM PDT
Aung Tin ကိုတင်မောင်သန်းနှင့် ဦးညွန့်မောင်ရှိန်ကို ဖမ်းသွားပြီလို့ ကြားရတယ်။
If true…This isacase of Genocide Criminal Myanmar Government arresting the INNOCENT VICTIM Myanmar MUSLIMS…UN and OIC must act swiftly.
Storm Rider အထက်ပါ အင်တာဗျူးဖြေကြားချက် အပြည်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရသစ် ပြန်ဖွဲ့ပါ။
ဟာဂျီ ဦးတင်မောင်သန်း (ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး စုံးစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်)
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးမှာ အစိုးရမှာ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ လုံလောက်တဲ့ အင်အားမရှိဘူး။ အင်အားနည်းနေတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက လုံခြုံရေးတာဝန်တွေကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ထမ်းဆောင်ခွင့်မရလို့ အခြေအနေတွေကို မအုပ်မိ မထိန်းမိတာလို့ပဲ ကျွန်တော်ကတော့ မြင်တယ်။ သမ္မတကြီးက စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေကို သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မြေပြင်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူး။ အောက်ခြေမှာ တာဝန်ခံပြီး အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ လူတွေက မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ရိုးရိုးသားသား ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ၀န်ထမ်းကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ အလုပ်မလုပ်ကြဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးက အကြမ်းဖက်သမားတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ပြည်နယ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေကို မထိန်းဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်နဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း အပါအ၀င် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပါ အကြမ်းဖက် လူတစ်စုကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သဘော၊ အကြမ်းဖက် ကွန်ရက် အောက်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ သဘောရှိတယ်။ မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတကာမှာ ကိစ္စတစ်ခုကို တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အစိုးရများဟာ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် နှုတ်ထွက်ကြပါတယ်။ သူတို့လည်း ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် နှုတ်ထွက်သင့်ပါတယ်။ အခု (၅)လ ကျော်ကြာတဲ့အထိ ဒီဒေသမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်တာလဲ။
တကယ် ဒီကိစ္စမှာ ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူလိုက်ရင် ဒီပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားမယ်။ ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးမယူဘဲ ပစ်ထားတဲ့အခါကျတော့ တိုင်းပြည်လည်း သိက္ခကျလှပါဘိ။ ရအောင်ထိန်းပါပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လုံးဝတာဝန်ယူနိုင်မှုမရှိတဲ့ လက်ရှိပြည်နယ်အစိုးရထွက်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရသစ်ပြန်ဖွဲ့ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကပဲ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ပါလို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်။
ပြည်နယ်အစိုးရ နှုတ်ထွက်သင့်ကြောင်း ဝေဖန်သည့် ဦးတင်မောင်သန်းအား ကော်မရှင်က ထုတ်ပယ်ပာု သတင်းများ ပျံနှံ့
သတင်း – ပိာန်းအောင် (အောက်တိုဘာ ၂)
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးတင်မောင်သန်းအား ကော်မရှင်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပယ်ကြောင်း ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာ အချို့၌ ပြန့်နှံ့နေမှုအပေါ် ကာယကံရှင့်နှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းထံသို myanmarmuslim.net မှ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာတွင် ငြင်းဆိုခြင်း မရှိသကဲ့သို့ အတည်ပြုခြင်းလည်း မရှိကြောင်း အသိပေး တင်ပြအပ်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဟာဂျီ ဦးတင်မောင်သန်းအား ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ကြောင်း သတင်း ပျံ့နှံ့လာရခြင်းမှာ မြန်မာပို့စ်ဂလိုဘယ် သတင်းဂျာနယ် အမှတ် ၈၃ ပါ အင်တာဗျူး ဖြေဆိုမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း အများစုက ထင်ကြေးပေး သုံးသပ်ထားသည်။
အဆိုပါ အင်တာဗျူးတွင် ဦးတင်မောင်သန်းက
၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်နဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်း အပါအ၀င် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ကပါ အကြမ်းဖက် လူတစ်စုကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သဘော၊ အကြမ်းဖက် ကွန်ရက်အောက်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ သဘောရှိတယ်။ မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတကာမှာ ကိစ္စတစ်ခုကို တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အစိုးရများဟာ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် နှုတ်ထွက်ကြပါတယ်။ သူတို့လည်း ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် နှုတ်ထွက် သင့်ပါတယ်။ အခု (၅)လ ကျော်ကြာတဲ့အထိ ဒီဒေသမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်တာလဲ။
ဟုဖြေကြားခဲ့သည်။ အထက်ပါ အင်တာဗျူးဖြေကြားချက် အပြည်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted: 02 Nov 2012 07:11 AM PDT
The leftwing parties thought Islamic supremacists would be satisified with their step and fetch it for the Sharia. The leftwing parties thought they could buy the Muslim vote with submission, appeasement and accomodation. Fat chance.
Democrat party, take note. A Muslim party in Belgium says it's preparing to campaign for setting up an Islamic state there. Two candidates from the newly-established Islam party won seats inarecent municipal election. RT discusses this with Philip Klaas,aBelgian Euro MP
Posted: 02 Nov 2012 07:07 AM PDT
Yaseen was pulled from the fire and initially given CPR in the hope that his life could be saved Photo: WALES NEWS SERVICE 3:43PM GMT 01 Nov 2012
Sara Ege usedastick to beat seven-year-old Yaseen "likeadog" if he couldn't recite passages from the Islamic text. The beatings were so brutal that the boy died from his injuries, and his mother tried to burn the body to destroy the evidence, Cardiff Crown Court was told. Yaseen was originally thought to have died in the house fire. Butapost-mortem examination showed Mrs Ege had been beating and abusing her little boy in the months leading up to his murder. Inavideo recording of her interview with police, Mrs Ege told them: "I was trying to teach him the Koran. "I was getting more and more frustrated. If he didn't read it properly I would be very angry — I would hit him.
"We hadahigh target. I wanted him to learn 35 pages in three months. "I promised himanew bike if he could do it. But Yaseen wasn't very good — afterayear of practice he had only learntachapter." The court heard Mrs Ege, 32,auniversity graduate, and her husband, Yousuf, had enrolled Yaseen in advanced classes at their local mosque. They wanted him to becomeahafiz — an Islamic term for someone who memorises the Koran. Yaseen was coming to the end ofathree-month trial period at the mosque, and Ege was keen for him to impress his Imam.
Mrs Ege told officers: "I was getting all this bad stuff in my head, like I couldn't concentrate, I was getting angry too much, I would shout at Yaseen all the time." She also hit him withahammer,arolling pin andaslipper, as well as repeatedly punching him, the court heard. She would allegedly lock him in the shed, tie him toadoor, and force him to do press-ups.
In the months after Yaseen's death, Mrs Ege toldadoctor she been told to kill him by Shaitan — an Islamic name for the devil, the court was told. She said: "I have become so harsh, I even killed my own son." Her husband, 38, denies causing or allowing the death ofachild by not stopping the beatings. The trial continues.The Telegraph.
Posted: 02 Nov 2012 09:12 AM PDT
Jadi seperti Shahrizat, nasihat Rafizi kepada NazriRafizi Ramli hari ini mencabar Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz untuk bersikap "gentleman" dan mengikut jejak langkah rakan Kabinet, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil dengan mengambil cuti berikutan dengan hubungannya dengan peniaga balak Sabah, Michael Chia.
Menurut Rafizi, satu laporan akan dibuat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap Nazri dan keluarganya pada Isnin ini, dengan tuduhan Chia memberi anak menteri tersebut kenderaan mewah bagi membebaskan dirinya dari tuduhan rasuah.
"Saya rasa ia hanya memalukan pada Nazri jika Shahrizat dilihat lebih berani dan bertanggungjawab.
"Jadi jika dia (Nazri) seorang pemimpin, jadi seorang "gentleman" dan ikut jejak Shahrizat, ambil cuti sementara siasatan sedang dibuat," kata pengarah strategi PKR itu di sidang media hari ini, kali kedua semenjak semalam.
Chia baru-baru ini dibersihkan namanya dari tuduhan rasuah melibatkan Ketua Menteri Sabah Datuk Musa Aman selepas badan pencegahan rasuah Hong Kong mendapati beliau cuba untuk menyeludup wang ke Malaysia, adalah "dana politik" untuk Umno Sabah dan bukan wang peribadi Musa.
Rafizi memberitahu Nazri, yang baru-baru ini menggelarkan dirinya sendiri sebagai "menteri undang-undang nombor satu", mungkin akan didapati bersalah kerana beliau adalah menteri yang memberitahu Parlimen bahawa Musa telah dibebaskan dari tuduhan rasuah.
Dengan mengumumkan Musa bebas dari tuduhan rasuah, Rafizi menambah, Nazri secara tidak langsung membebaskan Chia juga, walaupun gagal mengemukakan siasatan kepada kedua-dua individu berikut, sama ada dari SPRM atau dari Suruhanjaya Bebas Pencegahan Rasuah Hong Kong (ICAC).
"Jika apa yang kami katakan tidak benar, dedahkan semuanya, Nazri, Jabatan Peguam Negara dan SPRM, semua harus dedahkan kertas siasatan mereka bahawa mereka mendakwa Chia tidak melakukan kesalahan tersebut," kata Rafizi lagi.
"Kami tidak akan hanya ikut kata Nazri bulat-bulat, kami juga mengalami pengalaman yang sama sebelum ini semasa kes NFC. Kita mesti buktikan bahawa ICAC telah membersihkan Chia, dari Hong Kong sendiri.
" Rafizi tidak bersetuju dengan kenyataan Nazri semalam bahawa tidak ada perselisihan kepentingan apabila anaknya menggunakan Hummer milik Chia, dengan mengatakan Nazri mempunyai pengaruh yang kuat dalam Parlimen.
"Dengan kenyataannya di Parlimen, yang membersihkan nama Chia ke atas pertuduhan tersebut, ia membawa pengaruh dalam kenyataannya, lebih dari SPRM sendiri," katanya lagi.
Dengan Nazri mengisytiharkan kes Musa-Chia telah ditutup, ia bagaimanapun tidak ada kenyataan dari SPRM atau ICAC.
Apabila ditanya tentang tuduhan Rafizi semalam, Nazri semalam tidak menafikan atau mengatakan bahawa anaknya menggunakan Hummer milik Chia, sebaliknya beliau berkata tidak ada salahnya jika ianya betul.
Menteri senior itu juga berkata tidak perselisihan kepentingan dalam hal ini, dan mengatakan beliau tidak menyiasat atau membersihkan nama Chia dalam kes rasuah itu.
"Keterangan Nazri tidak masuk akal langsung, dan saya lebih 'gentleman' dari dia kerana saya berani memilih jalan ini dan bersuara, dan tidak berlindung di sebalik imuniti ahli Parlimen.
"Dan saya rela untuk dihadapkan ke mahkamah," kata Rafizi yang kini menghadapi dua kes dalam pendedahannya terhadap NFC — kerana tuduhan fitnah Shahrizat, dan melanggar undang-undang bank.
Pada awal sidang media, Rafizi memaparkan tujuh video pengintipan sebagai bukti tambahan dengan video semalam yang menunjukkan keluarga Nedim menggunakan kenderaan mewah Chia.
Menurut Rafizi, kenderaan Hummer tersebut selalunya digunakan oleh pemandu peribadi keluarga dan pengawal peribadi mereka dan digunakan untuk kenderaan 'menyimpan barang'.
Bagaimanapun, tidak ada satu video memaparkan Nedim atau ahli keluarganya. -TMI
Rafizi: Nazri Perlu Bercuti Hingga Selesai Di Siasat SPRM PETALING JAYA,2NOV – Pengarah Strategi PKR, Rafizi Ramli menggesa Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nazri Abd Aziz bercuti buat sementara waktu dari jawatannya sementara menunggu sisatan SPRM berhubung dakwaan keluarganya mendapat habuan dari ahli perniagaan, Michael Chia. Saranan ini dibuat Rafizi ekoran Nazri Aziz lantang mengkritik Ketua Wanita Umno, Datuk Seri Shahrizat Jalil yang pernah dikaitkan dengan isu Perbadanan Fidlot Nasional (NFC) dan menyaksikan penglibatan keluarganya. "Mengambil kira pendekatan yang telahpun diambil oleh pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak bila berdepan dengan seorang menteri yang dituduh di dalam rasuah yang melibatkan keluarga beliau seperti mana kes NFC dan Datuk Seri Shahrizat Jalil, maka wajarlah Datuk Seri Nazri Aziz bercuti dari jawatan beliau sementara menunggu siasatan dijalankan untuk membersihkan nama beliau," katanya pada sidang media di Ibu Pejabat PKR hari ini. Rafizi juga turut merujuk Akta SPRM 2009 Bahagian IV, (Kesalahan dan Penalti) kesalahan menerima rasuah yang menakrifkan pelakuan rasuah mengikut Seksyen 16(a) dan 16(B). Seksyen 16(a) menetapkan bahawa perlakuan rasuah dikira berlaku walaupun suapan itu diterima oleh orang lain dan manfaatnya dinikmati orang lain. Seksyen 16(B) menguatkan lagi dakwaan yang didedahkan PKR dengan menetapkan bahawa perlakuan rasuah dikira berlaku walaupun tiada suapan sebenar yang diterima. Kenyataan Rafizi tersebut ekoran pendedahan beliau berhubung dakwaan penggunaan kereta mewah Hummer dengan nombor pendaftaran WNX 9776 milik Michael Chia oleh Nedim Nazri Aziz dan keluarganya. Ahli perniagaan Michael Chia telah didakwa dikaitkan dengan dengan pendedahan mengenai wang berjumlah RM40 juta yang dipercayai mempunyai kaitan 'rapat' dan 'mempunyai hubungan baik'dengan Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman dan Umno Sabah. Menurut Rafizi lagi, beliau menyambut baik reaksi pantas yang dibuat Nazri meskipun banyak menghamburkan kata nista terhadapnya yang bersifat peribadi. Beliau yang sebelum ini seorang akauntan berkata, beliau tidak mahu terlibat dalam pertelingkahan peribadi dengan sesiapa sebaliknya memberikan fokus kepada persoalan rasuah dan salahguna kuasa yang mungkin berlaku. Sehubungan itu, PKR akan membuat satu laporan kepada Suruhanjaya Pencegaha Rasuah Malaysia (SPRM) Isnin hadapan pada jam3petang. Sebelum ini, pemimpin popular DAP Lim Kit Siang turut menggesa kerajaan agar sebuah suruhanjaya Diraja ditubuhkan untuk menyiasat dakwaan penyeludupan dana asing oleh Umno, terutamanya berhubung "sumbangan politik" RM40 juta yang juga dikaitkan dengan Michael Chia.
Posted: 02 Nov 2012 06:52 AM PDT
Posted: 02 Nov 2012 06:25 AM PDT
မှူးဇော် သဘောထား သမ္မတရုံးနှင့် မဆိုင်ဘူးလား လင်းသန့်
ဦးဇော်ဌေး၏ "ပုဂ္ဂလိက အမြင် တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်" ဟု ပြောဆိုရေးသားသော်လည်း သတင်းအချက်အလက်များ မှားယွင်းထုတ်ပြန်ခြင်းကြောင့် သမ္မတရုံး နာမည်ပျက်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ "နောင်တခေတ်၏ အောင်စစ်သည်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် "ရိုဟင်ဂျာ သွေး စည်း ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အမည်ခံ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားများ လက်နက်များဖြင့် နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော် လာကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ပြည်ပမှ ရိုဟင်ဂျာများ ၀င်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတပ်များမှ ကြိုတင်သတင်းရရှိထားပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အပြီးတိုင် ချေမှုန်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ချေမှုန်းနေပြီဟု ယူဆပါသည်" ဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ယနေ့ထိ ယင်းသတင်း ဟုတ်မှန်ကြောင်း သမ္မတရုံးနှင့် အစိုးရက အတည်ပြုထုတ်ဖော်ခြင်း မရှိနိုင်ပေ။
[My Comment: And he wrote that Rohingya armed invaders are even shooting the RPG Rocket propelled Grenades ...hit one SOB...Actually Moo Zaw is successful in pulling ALL the citizens behind him, gov and Tatmadaw by INVOKING the Loyalty to the country to defend the armed invaders. Any one who opposed would becomeatraitor. He had given Ultra-Nationalistic spirit and hatred to Rohingyas and Muslims in Myanmar...If gov continue to keep him he and the gov could be made answerable at ICC for this HATE CRIME leading to Crimes Against Humanity and GENOCIDE.]
ဧရာဝတီ သတင်းဌာန၏ "ရခိုင်အရေး အစိုးရ ကိုင်တွယ်မှု ညံ့ဖျင်းသည်" ဟူသည့် အယ်ဒီတာ့ အာဘော်အား သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး တဦးဖြစ်သည့် ဦးဇော်ဌေးက သူ၏ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွင် တုံ့ပြန် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ မှုသည် သမ္မတရုံး၏ သဘောထား မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်သဘောထားမျှဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
မှူးဇော် အမည်ဖြင့် ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် ဦးဇော်ဌေးက "မိမိရပ်တည်ချက် မည်သို့ဖြစ်သည်ကို မိမိဘာသာ သိလျှင် ပြီးပါသည်" ဟူသော ခေါင်းစဉ်ပါ စာပိုဒ်ကို ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်၌ ဖော်ပြရေးသားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ရေးသားချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီ မြန်မာပိုင်းအယ်ဒီတာ ရဲနည်က " ဒီစာဖတ်ပြီး ကျနော်တို့မှာ မေးခွန်းတွေ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ တစ်အချက် ဒီစာကို ရေးသားသူဟာ သမ္မတရုံးရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်ရှိတဲ့ အရာရှိဖြစ်တာမို့ သူ့သဘောထားဟာ သမ္မတရုံးရဲ့ သဘောထားကို ထင်ဟပ်နေသလား။ နှစ် အချက် တကယ်လို့ ကိုယ်ပိုင်သဘောထားဆိုရင် နိုင်ငံကို ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ သမ္မတရုံးဟာ ရုံးဝန်ထမ်းတွေကို ရုံးရဲ့သဘောထားမူဝါဒကို မထင်ဟပ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိက ထင်မြင်ချက်တွေကို ရေးဖို့ အထိန်းအကွပ်မရှိ လွှတ်ပေးထားတဲ့ ရုံးတွင်းယဉ်ကျေးမှု ရှိသလား။ သုံးအချက် သမ္မတရုံးရဲ့ သဘောထားဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ မတူကွဲပြားမှုတွေကို လက်ခံနားလည်တတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု ပေါ်ပေါက်လာရေး ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ရာ ကျသွားပါတယ်။ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အာမခံထားတာကိုလည်း သံသယဖြစ်စေပါတယ်" ဟု ပြောဆိုသည်။
"ကျနော့် အမြင်တော့ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရ ဒီလို အပြောခံလိုက်ရတယ်။ ဧရာဝတီက တွယ် လိုက်တယ်ပေါ့ ဗျာ၊ အစိုးရက အသုံးမကျဘူးလို့ ပြောလိုက်တာပဲ။ ပြောလိုက်တာပေါ်မှာ ကျနော်က ကျနော့်ဟာကျနော် Defend လုပ်တာ၊ ဒါသည် ဘယ်သူကမှ ခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ ကျနော့် ပုဂ္ဂလိက အနေနဲ့ပဲ" ဟု ဦးဇော်ဌေးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
သို့ရာတွင် ဦးဇော်ဌေးက ဆက်လက်ရေးသားရာ "(အားလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။) နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ Civil Society များ၊ အမြဲတမ်း အတိုက်အခံ လုပ်နေရမှ ကျေနပ်နိုင်သော၊ သမ္မတကြီးနှင့် အစိုးရ အပေါ် မကောင်းပြောရမှ စာရင်းအိပ်ပျော်ကြသူများ အားလုံးကို တိုက်ရိုက် ရည်ညွှန်းပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်" ဟု ဖော်ပြသွားခဲ့သည်။
Posted: 02 Nov 2012 05:22 AM PDT
At least MCA avows it aloud that the party, leaders and members respect the Federal Constitution, recognising Islam as the official religion, the rights of Raja-Raja Melayu... and the rights of each and every citizen of Malaysia!
Comparatively, Pakatan Rakyat had on few occasions mention about amending the Constitution, turning Malaysia intoasecular country and questioning the rights of the Palace.
When it comes to hudud, DAP and PKR strongly oppose it. On Barisan Nasional side, MCA too joined them but inatotally different tone.
MCA is right, that in this multiracial society, any new law on religion must be clearly explained to avoid it be perceived as intimidation to other faith. And PAS hudud, while still unclear of its content and enforcement mechanism, is rolling on politics.
Many agree that if PR wins the next general election, there wouldn't be any hudud at all because PAS only wants to share the Federal power with its two allies.
However, after that stinging statement by MCA president Chua Soi Lek on 'hududala PAS' the other day, many were driven by their Islamic sentiment to condemn him and the party as being anti-Islam and anti-hudud.
MCA has been there much longer than PAS, PKR and DAP, way back before the country achieved Independence and is perhaps the only party next to Umno which understands what Islam for the country is.
And here isasimple statement by MCA about what it's all out against that 'hududala PAS'...
KUANTAN: MCA respects the position of Islam in the country but does not want political parties to claim authority over religious matters, said central committee member Datuk Ti Lian Ker.
He said there were already institutions that had been authorised to regulate Islamic matters and political parties should allow them to perform their duties.
"The public should not confuse political parties with institutions like the National Fatwa Council. No political party should encroach into the jurisdiction and authority of these institutions," said Ti atapress conference here Friday.
He said MCA respected the law and the Federal Constitution but would not tolerate political parties that sidelined the Islamic institutions by implementing their own version of the law.
"The law that is to be implemented by PAS is inconsistent and not in line with real Islamic law. For example, the PAS spiritual leader has said it will be enforced on non-Muslims as well. Also,aMP has questioned their law which allows husbands to sodomise their wives.
"From time to time, PAS also amends its law to fit its political agenda. So it cannot be said that PAS law is the same with hudud law," he said.
Ti, who is also Kuantan MCA chairman, said the division would continue supporting party president Datuk Seri Dr Chua Soi Lek in voicing the people's concerns on PAS' version of hudud.
"It isaflaw to say we cannot comment whenapolitical party wants to legislate laws in whatever form in the name of Islam. It is not right to intimidate or threaten non-Muslims who have questions and want explanations," he said.
The Malays, the Muslims deserve every right to uphold and defend the religion. They usually will react strongly when someone 'non-Muslim' talks about Islam and the Islamic law, forgetting that there are many non-Muslims out there who study and understand Islam better than majority of the Muslims themselves!
On the contrary, there are Malays who like condemning other religions without taking into consideration its sensitivity.
And I wonder how many 'average' Muslims today can read Jawi eloquently like former MCA strongman Lee Kim Said and ex Shin Min Daily editor Cheng Seong Huat.
Remember how the Jawi newspaper 'Utusan Melayu' had to close shop? Partly because the Malays themselves are not interested to read Jawi!
Posted: 02 Nov 2012 06:45 AM PDT
Keadilan hari ini mendedahkan, 1014 hektar tanah hutan simpan tetap di Mukim Serting Ulu, Jempol diberi kepada ASLI-YNS Sdn Bhd, syarikat milik Pengerusi MCA Negeri Sembilan, Senator Dr Yeow Chai Thiam.
"Lebih memalukan syarikat ini hanya ada modal keseluruhan sebanyak RM10, dan Yeow hanya miliki pelaburan berjumlah RM5 sahaja," jelasnya sambil menunjukkan salinan maklumat syarikat dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada sidang media di Ibu Pejabat KEADILAN di sini, hari ini.
Rafizi berkata, walaupun nama syarikat itu seolah-olah menggambarkan ia adalah usahasama dengan YNS, carian rasmi di SSM mengesahkan ia dimiliki oleh Yeow.
Menurut salinan maklumat SSM yang turut dilampirkan, ASLI-YNS juga dimiliki Chan Ah Meng dengan pelaburan RM2 dan Yong Ing Kiat pula RM3.
Pendedahan terbaru ini menyangkal dakwaan Menteri Besar Negeri Sembilan, Mohamad Hassan tempoh hari bahawa tanah hutan simpan tersebut dimiliki YNS dan hanya dipajak kepada pihak swasta.
"Walaupun nama syarikat ini memberi gambaran seolah-olah ia sebuah syarikat usahasama dengan Yayasan Negeri Sembilan, carian rasmi dengan Suruhanjya Syarikat Malaysia (SSM) mengesahkan bahawa ia dimiliki dan dikawal oleh Senator Dr Yeow Chai Thiam yang juga Pengerusi MCA Negeri Sembilan," katanya.
Sebelum ini, skandal tanah hutan simpan ini didedahkan berdasarkan Laporan Audit 2010 yang yang menegur Kerajaan Negeri berkenaan penggantian kawasan hutan simpan.
Sehubungan itu, PKR menunggu penjelasan pihak Menteri Besar sebelum mengambil tindakan lanjut sebelum mendedahkan tiga lagi syarikat lain yang terbabit. -selangorku
Posted: 02 Nov 2012 03:57 AM PDT
Not only am I relieved, I am also thankful to be Malaysian. Whilst millions are suffering in the eastern US, we are blessed in this land we call our tanah air because there is food on the table, jobs are still available and we have not been hit byanatural disaster since the 2004 tsunami. Yet, I am not sure if many of us are aware of the tough and difficult times ahead. How the impact of Sandy on US will affect the rest of the world, you and me and our loved ones.
Despite the decades of reading and research I have undertaken circa 1977, I never expected it to strike in this manner. I doubt any of us did. And the domino effect will be devastating. Try calculating the immeasurable loss of property, lives, infrastructure, businesses, investments etc. I doubt any one can computeafigure. Perhaps they main have to coinanew word. The Fukushima earthquake is minor compared to what we see. The worst has yet to come.
Nothing I read or studied in the past ever prepared me for this. There will be food shortages in the weeks to come. Prices of food, necessities, medicines, anything and probably almost everything will escalate. Businesses, corporations, conglomerates in the west will collapse. Can you imagine for how long the ripple effects of Sandy will last? It is not going to be forafew weeks, orafew months, but probably years. Perhaps they may never recover ...
You might think I am exaggerating. For sure, I am not. The devastation goes beyond the photographs of floods or fires or looting or the damage we see from afar. Tragically, even though times are a-changing for the worse, man has not changed for the better. Read the following post carefully and also all the comments in the post. If you depend on medication manufactured in US, please stock up. No joke. Take care, watch and pray. I worry for my friends who are in N.E. part of US. Friends in Canada have already indicated to them that their homes are open for them to take refuge.
18 Startling Quotes About The Incredible Destruction Caused By Hurricane Sandy by Michael Snyder
It is being reported that more than 50 people are dead and more than 8 million people along the east coast have lost power. Those without power might not get it back foraweek or more.
In New York City, an all-time record storm surge of almost 14 feet caused incredible destruction. It is going to take months for New York City to recover, and along the Jersey coast things are even worse. Hurricane Sandy really did turn out to be "the worst case scenario" for much of the eastern seaboard. At this point more than 15,000 flights have been cancelled, and nobody knows when subway service in New York City is going to be restored. More than4million peopleaday use that subway system, and right now many of the most important tunnels are absolutely flooded with water. Sadly, this crisis is far from over.
The storm formerly known as Hurricane Sandy has moved inland over Pennsylvania where it continues to doatremendous amount of damage. The full extent of the destruction caused by this storm will probably not be known for weeks.
"The devastation on the Jersey Shore is some of the worst we've ever seen. The cost of the storm is incalculable at this point."
"The New York City subway system is 108 years old, but it has never facedadisaster as devastating as what we experienced last night. Hurricane Sandy wreaked havoc on our entire transportation system, in every borough and county of the region.
It has brought down trees, ripped out power and inundated tunnels, rail yards and bus depots. As of last night, seven subway tunnels under the East River flooded. Metro-North Railroad lost power from 59th Street to Croton-Harmon on the Hudson Line and to New Haven on the New Haven Line.
The Long Island Rail Road evacuated its West Side Yards and suffered flooding in one East River tunnel. The Hugh L. Carey Tunnel is flooded from end to end and the Queens Midtown Tunnel also took on water and was closed. Six bus garages were disabled by high water. We are assessing the extent of the damage and beginning the process of recovery. Our employees have shown remarkable dedication over the past few days, and I thank them on behalf of every New Yorker.
In 108 years, our employees have never facedachallenge like the one that confronts us now. All of us at the MTA are committed to restoring the system as quickly as we can to help bring New York back to normal."
"The Hudson River came in and filled half of Hoboken likeabathtub"
"I looked out and the next thing you know, the water just came up through the grates. It came up so quickly you couldn't do anything about it. If you wanted to move your car to higher ground you didn't have enough time"
"I mean, there's cars that are just completely underwater in some of the places I would never believe that there would be water."
CLICK HERE for the rest of the post. Please read the 100+ comments in that post.
Posted: 02 Nov 2012 03:41 AM PDT
I hope that Myanmar Government and GOOD MONKS would take action on U Wira Thu and Racist Rakhine monks…Then only people would have RIGHT view of Thiraveda and would NOT have the WRONG view as Mahayana Vs Hinayana based on those opposing personalities.
Stop Wira Thu and Rakhine Rakhine Monks to save the dignity of Buddhism to prove that it is not Hinayanabut but Thiraveda.
Posted: 02 Nov 2012 02:54 AM PDT
NLD ပါတီရဲ့ လူထုထောက်ခံမှုကို ဖြိုခွဲချင်လို့ အမျိုးသားရေးကို ခုတုံးလုပ် တောင်ကုတ်မှာ ရက်ရက်စက်စက် လူသတ်ပွဲတစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး ကုလား-ရခိုင် အဓိကရုဏ်းကို အသက်သွင်းခဲ့တယ် လုပ်နေကျပုံစံအတိုင်း အစွမ်းကုန်တင်းခံပြီးမှ ဇာတ်လမ်းအထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်
မှာ ပြန်လျှော့ချတဲ့နည်းနဲ့ လူထုထောက်ခံမှုကို ဖဲ့ယူခဲ့တယ်။ အဓိကရုဏ်းကြောင့် ရခိုင်တွေပိုစည်းလုံးပြီး ရခိုင်ပါတီရဲ့ဒေသတွင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို မြင်လာတော့ တစ်မျိုးကြ
ံပြန်တယ်။ ရခိုင်တွေကို မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေ၊ အဆင်ခြင်မရှိ လူမျိုးရေးမုန်းတီးသူတွေအဖြစ် ပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ရခိုင်ပါတီက ကန့်ကွက်လို့ လွှတ်တော်မှာမတင်လိုက်ရတဲ့ သမ္မတသ၀ဏ်လွှာမှာ ပူးတွဲပါလာတဲ့ သတင်းသုံးသပ်ချက်ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။
အဲဒီအကွက်တွေကို ရွေ့နေတာ ဘယ်သူလဲ။ ခုတစ်ခါထပ်စွပ်စွဲပြန်တယ်။ အဓိကရုဏ်းမှာ ကြိုးကိုင်သူတွေရှိနေတယ်တဲ့။ ဘင်္ဂလီတွေဖက်မှာ ကြိုးကိုင်နေသူတွေရှိတယ်ဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံး နာမည်တွေနဲ့တကွ သိပြီးသားပါ။ အကုန်လုံးပြည်ပမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နဲ့နေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ ကြိုးကိုင်သူကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဒီလူတွေအတွက် အကျုံးမ၀င်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီစကားရဲ့ ဦးတည်ချက်ဟာ ဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲ။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLDအတွက် နေရာသိပ်မကျန်တော့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် အဓိကပြိုင်ဖက်ဖြစ်လာမှာ RNDP ဆိုတာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။ ဒေသတွင်း လက်ဝါးကြီးအုပ်စီမံကိန်းတွေအတွက် အဓိကဆူးညှောင့်ခလုပ်ကလည်း ဒီပါတီပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ခုဆို ကြံ့ဖွတ်တွေက ရခိုင်တွေကို ကြိုးကွင်းပစ်ဖို့လုပ်နေပါပြီ။ ကြိုးကွင်းစွပ်ခံလိုက်ရတာနဲ့ ကြိုးကိုင်သူအဖြစ် အရေးယူ၊ နိုင်ငံတကာအလည်မှာ သူတို့က အပြစ်မရှိဘူးပေါ့လေ။ စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက် ဒီလောက်ကောက်ကျစ်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်မိခဲ့ဘူး။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရာထူးကနေ ပြုတ်သွားပေမယ့် ခုလိုကလိမ်ကကျစ် ကုလားဖန်မထိုးပဲ သမာသမတ်ကျကျ ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် အငြိမ်းစားမယူခင် ခုလက်ရှိ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတဲ့ ယူနီဖောင်းနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်သွားလို့ရပါတယ်။ ခု အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားတွေ ၀ံသာနုဆီရောက်နေပါပြီ။ တကယ်တော့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှာပါတဲ့ ဇာဂနာလိုလူမျိုးတွေက ကြိုးကောက်ပေးသူအဆင့်လောက်ပဲ ရှိတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ တကယ်တမ်းကြိုးကိုင်နေတဲ့လူကတော့…………ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်း ……ဘဲ
၀ံသာနု စာမျက်နှာမှ…..မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ သတင်းနဲ့ တင်ပြပေးပါတယ်
Posted: 02 Nov 2012 04:32 AM PDT
"Kereta berjaya diangkat menggunakan kren pada jam 12.
30 tengah hari dan mayat mangsa ditemui tersepit di tempat duduk pemandu," katanya.
Posted: 02 Nov 2012 01:33 AM PDT
အယ်ဒီတာ့အာဘော် ရခိုင်အရေး အစိုးရ ကိုင်တွယ်မှု ညံ့ဖျင်းသည်
IF LOOKED OUT OF BOX…If this is the creation of the government…If gov created the triggers and outsoursed the Genocide…Gov is very successful.
တကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားလာသော ရခိုင်ပြည်နယ် ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု လုံးဝ ကင်းမဲ့နေကြောင်းနှင့် နေပြည်တော်အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှု ခရီးမတွင် အရာမရောက်ခဲ့ကြောင်း အထင်အရှား ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခတွင် "နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ၎င်းတို့ကိုဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်" ဟု သမ္မတရုံးမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းသည် မေလမှ စတင်ပေါ်ပေါက် ကြီးထွားလာနေသော လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး အမုန်းမီးတောက်များ ပိုမိုပြန့်နှံ့လာစေရေး သွေးထိုးနေသော စစ်သွေးကြွများနှင့် ရာဇဝတ်သားများက တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို မထေမဲ့မြင်ပြုပြီး ထင်ရာဆိုင်းခွင့် ရနေခဲ့ကြောင်း အတိအလင်း ဝန်ခံခြင်းပင်။
ဇွန်လအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတဦး အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရမှုနှင့် မွတ်ဆလင် ၁၀ ဦးအား ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်မှုတို့မှ စတင်ခဲ့ပြီး နှစ်ဘက်အုပ်စု အပြန်အလှန် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ယခုဆိုလျှင် အစိုးရထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရ လူပေါင်း ၁၆၂ ယောက် သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး လူပေါင်း သောင်းချီ၍ အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ကာ ဒုက္ခရောက်နေရပြီဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်ဖြစ်ပေါ်နေသော အမုန်းမီးကို အစိုးရအနေဖြင့် မည်သို့မျှ မငြိမ်းသတ်နိုင်တော့မည့် အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး မျိုးဆက်နှင့်ချီ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့သည့် လူမှုစနစ် ပျောက်ကွယ်သွားရပြီဖြစ်သည်။ ဘာသာကွဲ လူမျိုးစုနှစ်စုကြား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့နိုင်ရေးဆိုသည် ယခုအခါ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မျှသာ။
ယခင်စစ်အစိုးရ ကိုင်တွယ်မှုနှင့်မတူ သတင်းထောက်များ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများကို ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရာဒေသများသို့ သွားရောက်ခွင့်ပြုခြင်း၊ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးများ ကူညီထောက်ပံ့ခွင့် ပေးခြင်းများ အတွက် နေပြည်တော်အစိုးရကို ပြည်တွင်းပြည်ပက ထောက်ခံချီးကျူးကြသော်လည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ရေးများတွင် အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်မှုတွင်လည်း နှေးကွေးလွန်းနေသည်။
တောင်ကုတ်မြို့ လူ ၁၀ ဦး အသတ်ခံရမှု ကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ရန် ပြည်ထဲရေး ဒု ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇံမြင့် ဦးဆောင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီတခုကို နိုင်ငံတော် သမ္မတအမိန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သော်လည်း ယနေ့အထိ တရားခံ ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးသကဲ့သို့ နောက်ထပ် ဖွဲ့စည်းသော ရခိုင် ပဋိပက္ခ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်သည်လည်း အဖွဲ့ဝင် အချင်းချင်းကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘဲ အောက်ခြေလူထုနှင့်လည်း ဆက်ဆံရေး မပြေလည်ဖြစ်နေ၍ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ တင်ပြရမည့် အစီရင်ခံစာကို အချိန်မီ တင်သွင်းနိုင်မည့်အပေါ် သံသယရှိနေရသည်။
ရောဂါ၏ဇာစ်မြစ်ကို သေသေချာချာ သိရှိနားလည်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ကုသနည်းမှန်ကန်ရန်လည်း အရေးကြီးသည်။ ရခိုင်အရေး ဖြေရှင်းရာတွင် အစိုးရအနေဖြင့် ဇာစ်မြစ်ကို ရှာဖွေရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေခဲ့ပြီး ဆေးမြီးတိုဖြင့်သာ ကြိတ်ကုသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ယခုတဖန် ပုံစံတကျ မကုသ မထိန်းချုပ်နိုင်လျှင် နောက်တကြိမ် မြန်မာပြည် တနံတလျား လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး အမုန်းမီးများ ပြန့်ပွားကူးစက်မည့် အန္တရာယ် ကြီးမားစွာ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျဆိုရလျှင် ယင်းတာဝန်ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရသာမက ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မီဒီယာနှင့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးသမားများနှင့် လူထုလူတန်းစားပေါင်းစုံ အလွှာအသီးသီးမှ ဉာဏ်ပညာနှင့်ယှဉ်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှ စိန်ခေါ်နေသည့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
ယင်းသို့ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါက မြန်မာပြည်ကို ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအား တန်ဖိုးထား လေးစားသည့်နိုင်ငံအဖြစ် တည်ဆောက်ပြီး ကမ္ဘာ့အလယ် ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရေး ပြည်ထောင်စုသားတိုင်း၏ ဘုံရည်မှန်းချက်ကိုပါ လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး အမုန်းမီးက ဝါးမြိုဖျက်ဆီးတော့မည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ဖြစ်ပေကြောင်း။ ။